समाचार Archives | Page4of 465 | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
आफ्नो भेगमा प्रदेश राजधानी पार्न सांसदहरुको व्यापक लबिङ, प्रदेश एकमा यस्तो छ सम्भावना…
काठमाडौं । पुस पहिलो दिनदेखि पूर्वी नेपालमा चिसो ह्वात्तै बढेको छ । गरिब–विपन्न बस्तीमा कठ्यांग्रिएर ज्यानै जाला भन्ने चिन्ता छ । जाडोबाट जोगिन उनीहरूले ‘न्यानो’ खोजिरहेका छन् । मतदाताको जनज... Read more
सकियो तीनदिने मेडिकल एन्ड ल्याब सो…
काठमाडौं । राजधानीमा आयोजित तीनदिने चिकित्सा विज्ञान तथा प्रयोगशाला सम्बन्धी दोस्रो बृहत् प्रदर्शनी सकिएको छ। बिहीबारदेखि शनिबारसम्म चलेको प्रदर्शनीको ७ हजारभन्दा बढीले अवलोकन गरेका छन्। स्व... Read more
ह्याम्सको फार्मेसी अवैध, मोडल अस्पताललाई तीन दिने स्पष्टिकरण…
काठमाडौं । ह्याम्स हस्पिटल बुद्धनगरले अस्पतालभित्र सञ्चालन गरेको फार्मेसी अवैध भेटिएको छ । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गरेको अनुगमनमा अस्पतालले फार्मेसी दर्ताको प्रम... Read more
स्वास्थ्य शिबिरमा ३ सयभन्दा बढीको निःशुल्क जाँच…
पोखरा । पर्वतको कुश्मा नगरपालिका १२ ठुलीपोखरीस्थित प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्रको हाताभित्र एकदिने निःशुल्क स्वास्थ्य तथा आँखा शिविर सम्पन्न भएको छ। शिविरमा ३ सय ७० जनाले सेवा लिएका छन्। शिवि... Read more
एउटा कोठामा रहेको स्वास्थ्यचौकीको भवन बनाउन गाउँले दिए १० लाखको जग्गा…
बाबियाचौर। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका– ६ घारका बासिन्दाले स्वास्थ्य चौकीलाई १० लाखभन्दा बढी मूल्य पर्ने जग्गा उपलब्ध गराएका छन्। साँघुरो कोठाबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएको स्वास्थ्य चौकीको... Read more
स्थानीय तहमा शिक्षाका कर्मचारी गएनन्…
बैतडी । जिल्लाका स्थानीय तहमा शिक्षाका कर्मचारी नहुँदा शिक्षा कार्यक्रम प्रभावित भएको छ । जिल्लाका पाँचवटा स्थानीय तहमा शिक्षाका कर्मचारी खटाइए पनि ती ठाउँमा अझै कर्मचारी गएका छैनन् । जिल्ला... Read more
सार्वजनिक यातायात चढ्दै हुनुहुन्छ ? अब लाम बसेर गाडी चढ्नुहोस्…
काठमाडौँ । तपाईँ सार्वजनिक यातायात चढ्दै हुनुहुन्छ ? चढ्दै हुुनुहुन्छ भने अब दौडादौड गर्नुपर्दैन, लाम बसेर चढ्न सक्नुहुन्छ । सार्वजनिक सवारी साधनमा चढ्दा बलिया व्यक्ति जबर्जस्ती चढेर सिटमा ब... Read more
प्रदेशको राजधानी कपिलवस्तु बनाउन सांसदको माग…
जितपुर, कपिलवस्तु । प्रदेशको राजधानी कपिलवस्तु बनाउन यहाँबाट नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सांसद तथा प्रदेशसभाका विधायकले माग गरेका छन् । शनिबार तौलिहवामा राखिएको सम्मान तथा स्वागत कार्यक्रममा... Read more
नगरपालिकाको कार्यालय सारेपछि वडाध्यक्ष विरोधमा…
रुकुम । रुकुम पश्चिमको सदरमुकाम मुसिकोट नगरपालिकाको कार्यालय सारेपछि वडाध्यक्षले विरोध गरेका छन् । आफूहरुलाई कुनै जानकारी नदिएर मुसिकोट नगरपालिका– १ खलंगामा रहेको कार्यालय वडा नं ५ को सेरीग... Read more
ओलीकै विकल्पमा छ बहुमत…
काठमाडौं । प्रत्यक्ष र समानुपातिक मतगणनाको अन्तिम नतिजा आउँदासम्म बन्दै गरेको संघीय संसदको ठूलो दल नेकपा एमाले बाहेकलाई पनि जनताले बहुमतमा उभिने आधार दिएका छन् । केही स्वतन्त्र सांसद बाहेक... Read more